Cabdi Xaashi oo ku gacan seyray dalab uga yimid R/W Rooble, soo saaray 3 qodob | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Cabdi Xaashi oo ku gacan seyray dalab uga yimid R/W Rooble, soo...
Cabdi Xaashi oo ku gacan seyray dalab uga yimid R/W Rooble, soo saaray 3 qodob
Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi ayaa ku gacan seyray dalab uga yimida Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, si uu ula wareego gacan ku haynta doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ee Somaliland.
Cabdi Xaashi ayaa sheegay in xal aysan u noqoneyn tabashada ay qabaan in talada iyo maamulka doorashada loo gacan geliyo Rooble, islamarkaana loo baahan yahay in la xaliyo khilaafka labo garab u kala jebiyay guddiga doorashada Somaliland.
Waxa uu sheegay in marnaba aan la wareejin karin masiir umaddeed, ayna xaq Dastuuri ah u leeyihiin dadka reer Waqooyi inay ka tashadaan aayahooda iyo hubinta madax-banaanida doorashadooda.
“Golaha Siyaasiyiinta Somaliland wuxuu kugu wargelinaya (Ra’iisal wasaare) in aan masiir umadeed la wareejin karin ee ay dadka reer Waqooyi xaq dastuuri ah u leeyihiin ka tashiga aayahooda iyo hubinta madax-banaanida Doorashada 57-da kursi ee ay leeyihiin labada Gole,” ayaa lagu yiri waraaq uu soo saaray Cabdi Xaashi.
Qoraalka kasoo baxay Cabdi Xaashi oo ahaa labo bogg ayaa waxa uu si toos ah ugu socday Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, wuxuna kusoo jeediyay 3 QODDOB oo uu sheegay inay fure u noqon karaan xal ka gaarista xiisada.
Saddexda soo jeedin ee uu Cabdi Xaashi u gudbiyey Madaxda Golaha Wada-tashiga Qaran ayaa waxay kala yihiin;
Dhismaha jiheynta doorashada: In Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed ay noqdaan hogaan wada-jir ah oo haga maamulka doorashada.
Dib u mideynta labada garab ee guddiga: ayada oo labada dhinac si cadaalad ah loogu qeybinayo guddoonka guddiga.
Goobta doorashada iyo amnigeeda: In ay doorashada ka qabsoomto gudaha Xalane iyo inay amnigeeda sugaan ciidamada booliska Soomaaliya iyo AMISOM.
Hoos ka aqriso qoraalka uu soo saaray Cabdi Xaashi oo dhameystiran
Previous articleLionel Messi Oo Ugu Dambayn Mustaqbalkiisa U Hibeeyay Banaadirsom Barcelona, Heshiis Cusub Ayuu Saxiixay – Banaadirsom
Next articleGuddiga Doorashooyinka Heer Federaal oo War-Saxaafadeed soo saaray (Akhriso)